MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa la filayaa in maanta uu Safarka Deg Dega ah ku tago dalalka Dariska.
Sarkaal katirsan Xafiiska Madaxweynaha, ayaa u sheegay Warsidaha Garowe Online in Farmaajo uu booqan doono Uganda, Djibouti, iyo Eithiopia, isagoo kulan la qaadan doono dalalkaasi Madaxdooda sare.
Lugta hore ee Safarka Madaxweynaha ayaa ugu ambabaxaya wadanka Uganda, wuxuuna uga sii gudbi doonaa Djibouti, kadibna Eithiopia, hadii aan jadwalka socdaalkiisa wax iska bedelin.
Ujeedka safarkan oo qaadan doono mudo 4 ama 5 maalmood, ayaa ku qotama raadinta taageero Military, ay dowladda Farmaajo ka dalbanayso dalalkan uu booqanayo, si ay u qaado duulaan kama dambays ah, oo Al Shabaab dalka oo dhan looga sifeynayo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu dhawaan ku dhawaaqo Xaalad dagaal, isagoo shalay ka baaqday kulan uu la yeelan lahaa Labada aqal ee Baarlamaanka, oo arintaasi kala hadli lahaa.
Socdaalka Madaxweyne Farmaajo ayaa kusoo beegmaya, iyadoo xalay uu Madaxda dowlad goboleedyada ku casuumay Shir wadatashi ah, oo 28-ka bishan ka dhacaya Muqdisho, kaasi oo looga hadli doono xaaladda amni ee dalka.